ပုရိသတွေ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်အောင် ကပြလိုက်တဲ့ ခြူးလေးရဲ့ ဗီဒီယို – Zartiman
ဒါကတော့ လွပ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ကြည့်မိသူတိုင်း အချစ်ပိုစေလောက်အောင် ဆော့ကစားထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပါ။ ကဲ…ချစ်ပ ရိသတ်တွေလည်း ခြူးလေးရဲ့ Tiktok ဗီဒီ ယိုေ လးက အခါခါပြန်ကြည့်ရလောက်အောင် ကောင်းမွန်တာကြောင့် ကြည့်ပြီး အချစ်ပိုမိ စေမှာ အသေအချာပဲဖြစ်လို့ ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ ဆ က်လက်ေ လျှာ က် လှမ်းမ ယ့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှု တွေ ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးလိုက်ကြပါဦးနော်……. ။ခြူးလေး ဟာ Mrtv-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို များစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်…။
တက်သစ်စ မင်းသမီးလေးလို့ ပြောရပေမယ့် သူမရဲ့ သ ရုပ်ေ ဆာင်ကောင်းမှုတွေ၊ စိတ်သဘောထားဖြူစင်မှုတို့ကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း မှာပဲ အောင်မြင်မှုများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိလာတာပါနော်…။ ခြူးလေးဟာ လက်ရှိမှာလည်း ကြော်ငြာတွေနဲ့ pho to shooting တွေကို များ စွာရိုက်ကူးနေရတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ခြူးလေးက မကြာခ ဏဆိုသလို အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ရိုက်ကူးလေ့ရှိပြီး ပုံလေးတွေတိုင်း ကလည်း သဘာဝအတိုင်း ချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပါ..။ ဒါ့အပြင် အသစ်ဆန်းတွေကို အမြဲဖန် တီးေ လ့ရှိတဲ့ ခြူးလေးဟာ ယောက်ျားေ လးပုံစံဖမ်းပြီး ပရိသတ်တွေ အမြင်တစ်မျိုးခံစားရအောင် ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရပါသေးတယ်…။
ဒါကတော့ လှပျလပျပေါ့ပါးတဲ့ ဖကျရှငျလေးနဲ့ ကွညျ့မိသူတိုငျး အခဈြပိုစလေောကျအောငျ ဆော့ကစားထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးပါ။ ကဲ…ခဈြပ ရိသတျတှလေညျး ခွူးလေးရဲ့ Tiktok ဗီဒီ ယိုေ လးက အခါခါပွနျကွညျ့ရလောကျအောငျ ကောငျးမှနျတာကွောငျ့ ကွညျ့ပွီး အခဈြပိုမိ စမှော အသအေခြာပဲဖွဈလို့ ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။ သူမရဲ့ ဆ ကျလကျေ လြှာ ကျ လှမျးမ ယျ့ အနုပညာလှုပျရှားမှု တှေ ကိုလညျး ပရိသတျတှကေ အားပေးလိုကျကွပါဦးနျော……. ။ခွူးလေး ဟာ Mrtv-4 ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲတှကေို မြားစှာရိုကျကူးခဲ့ပွီး လကျရှိအခြိနျမှာ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားပွီဖွဈပါတယျ…။
တကျသဈစ မငျးသမီးလေးလို့ ပွောရပမေယျ့ သူမရဲ့ သ ရုပျေ ဆာငျကောငျးမှုတှေ၊ စိတျသဘောထားဖွူစငျမှုတို့ကွောငျ့ အခြိနျတိုအတှငျး မှာပဲ အောငျမွငျမှုမြားစှာကို ပိုငျဆိုငျရရှိလာတာပါနျော…။ ခွူးလေးဟာ လကျရှိမှာလညျး ကွျောငွာတှနေဲ့ pho to shooting တှကေို မြား စှာရိုကျကူးနရေတာကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။ခွူးလေးက မကွာခ ဏဆိုသလို အလှပုံရိပျလေးတှကေို ရိုကျကူးလရှေိ့ပွီး ပုံလေးတှတေိုငျး ကလညျး သဘာဝအတိုငျး ခဈြဖို့ကောငျးနတောပါ..။ ဒါ့အပွငျ အသဈဆနျးတှကေို အမွဲဖနျ တီးေ လ့ရှိတဲ့ ခွူးလေးဟာ ယောကျြားေ လးပုံစံဖမျးပွီး ပရိသတျတှေ အမွငျတဈမြိုးခံစားရအောငျ ရိုကျကူးတငျဆကျခဲ့တာကိုလညျး တှရေ့ပါသေးတယျ…။
ဆက်ဆီကျကျပုံစံနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေနေ့စဉ် လုပ်နေတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ Video လေး